Dhizaini - Dhizaini magazini
Therapyat Yemunhu Kumba
Therapyat Yemunhu Kumba Iyo Thermostat yeSmoni inopa minimalist, yakashongedzwa dhizaini, mukuputsa nemagariro echinyakare thermostat magadzirirwo. Iyo translucent cube inoenda kubva kune chena kuenda kune ruvara mune pakarepo. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuisa pane imwe yemashanu maficha anoshanduka mavara mafirimu kumashure kwesimba. Chinyoro uye chakareruka, iyo ruvara runounza kubata kwakaderera kwekutanga. Kubata kwepanyama kunochengetwa kushoma. Kubata kwakapusa kunobvumira kuchinja tembiricha apo zvimwe zvese zvinodzora zvakagadzirwa kubva kune mushandisi smartphone. Iyo E-ink chidzitiro yakasarudzwa kune yayo isingaenzaniswi mhando uye mashoma simba rekushandisa.
Rambi Masosi echiedza aya akasarudzika akaiswa pakati pechinhu chose, saka anovhenekera sosi nyoro uye yunifomu sosi. Nzvimbo dzakajeka dzinoparadzaniswa kubva mumuviri wakakura kudaro chimiro chakareruka chemuviri nezvikamu zvakaderera pamwe nekuchengetedza simba kuburikidza nekushandiswa kwemagetsi zvakanyanya zvinopa chimwe chiwedzerwa. Zvakare inobata muviri kuitira kushandura mwenje ON kana OFF ndechimwe chinhu chazvino chechiedza ichi chakasiyana. Kufungidzira kunotungamira kumisiyano mukuvhenekera uye kupenya kwemwenje kwakagadzirwa. Yakawanda mwenje kubva pamwenje kuitira kuti iye anoona arege kutora mukana wechiedza upenye. Kunaka kurarama.
Piggy Bank Icho chinhu ibhandi re piggy.Chimiro chakasarudzika chimiro chakasanganiswa chinodhura, chakashongedzwa zvishongo chinoratidza chinodikanwa uye chine mutsa uye kuvepo kwemisangano yenhengo dzemhuri nguva dzose. Asi chinonyanya kuratidza chimiro DeePee - zvese mukuwedzera mune zvakajairika zvinosangana nemazvo - nderekuti mazwi matsva, akasarudzika uye anoenderana nechero hunyanzvi "jewelry" ese akasarudzika pamba.
Akabata Banga Kubva muzana ramakore regumi namaviri yekutanga nzombe dzakanyorwa sechiitiko kana chekuona pachena. Nhasi kuziva kwekumutsa vanhu chiratidzo chemuongorori wepasi rose, kuve vagovani vechimiro chouMwari, isu tiri vese. "Chete Izvo Izvo Pano" inofanidzira nguva itsva, apo pachave nekutsakatika kwezviitiko zvehasha, kuverengerwa mune iyo yaimbova tsika yetsika, uye nhanho huru yekushanduka-shanduka padanho revanhu.
Kukura Mwenje Iyi purojekiti inofunga kutsigira iyi nyowani inopa yakazara kuzadza pfungwa yekubheka ruzivo. BB Bindu diki irambi rinokura, richida kudzokorora nzvimbo yezvinomera zvinomera mukati mekicheni. Iri vhoriyamu ine mitsara yakajeka, sechinhu chechokwadi minimalist. Iyo yakakwenenzverwa magadzirirwo akave akanyanya kufundwa kuchinjira kune akasiyana emukati emukati emukati uye achipa yakakosha kicheni kukicheni. BB Bindu diki idanho rezvidyarwa, mutsara waro wakachena unovakudza uye haukanganisa kuverenga.
Tafura kusanganisa kusanganisa ndicho chirevo chetafura iyi. matatu maple mafomu anouya pamwechete kuti adzore yakatsamwa girazi pamusoro. chigadzirwa chekunyatsofungisisa zvekushandisa uye kugona kwavo, chakasimba asi chakasimba pamhepo muchitarisiko uye chichirema kureruka, chinobuda seyemhando yekuyera uye yenyasha.
Therapyat Yemunhu Kumba Rambi Piggy Bank Akabata Banga Kukura Mwenje Tafura